iTools (OS X) ee Mac Review | MacArsenal
> Resource > Mac > Tenon Intersystems: iTools (OS X) ee Mac
iTools u Mac waa Suite ka mid ah qalabka Internet muhiim u halis e-Ganacsiga iyo ganacsiga bixinta content. Tani version of iTools u Mac OS X ayaa soo hagaagay ay ka shaqeynayaan inay qandaraaska u kordhiso oo kor loogu qaado OS X ee la dhisay-in xirka. Haddii aad rabto in la dhamaystiro ama kordhiso Apple ayaa waxaa ka mid ahaa Apache, waxaad ku rakibi karaa iTools oo ay ku jiraan dad badan oo fulintii maamuuska furan il aad u fiican. Iyada oo taageero ka fulintii kuwaas, servers network casri ah si fudud loo samaysan karta ama ay taageerto maamulayaasha xaqa maamulka Web browser dhibic-iyo-click ah. Waxaa aad kharash $349.00 laakiin waxay kuu ogolaanayaan inaad free maxkamad 14-maalin ah.
Waxaa loo adeegsaday ganacsiga
iTools waa xirfad inay marti badan oo shirkadaha ku server hal soo gaabin waqtiga dhalmada. Shirkadaha uma baahna inuu shaqaalayaal u kireeyo khubaro aad u tiro badan si ay u geeyo goobaha cusub dambe.
Waxay bixisaa interface dhibic-iyo-click ah. Tusaale ahaan, haddii macaamiisha ah ayaa diiday inay biilashooda ku bixiyaan, waxaad gab karaa sidii ciidammadoodii ahaayeen waxay dalwaddii la click hal.
Cabbirka iTools 7 waa ka wayn yahay 28.9MB. Sidaas darteed, waxaad u baahan tahay inaad waqti saacado badan si ay u download it via dial-up modem.
iTools waxaa anfacaya Web marti software guddi gacanta. Waxay isku daraa ka aamin, oo garaadlaawaha, domain-gaar ah oo lagu kalsoonaan karo Apache on Mac OS Server Maamulka X. iTools aamin goobaha Apache iyo ka dhigaysa goobaha maamulka fudud ay ku daray qaababka cusub oo dheeraad ah. Waxaa aad u ogolaanaya in ay Mudanayaasha ciidammadu dalwaddii la qasabno yar ama xataa hal oo kaliya click. In eray, waa hal-abuurnimo weyn u your computer.
iTools 7 ku habboon yahay inuu ku users Mac waxaa lagu casriyeeyo oo dadka isticmaala Windows iyo kuwa eegaya wareegaya Mac ah. The users UNIX jecel in ay isticmaalaan server software sida Apache on top of the fulintii gobolka-of-the art BSD UNIX sidoo kale u baahan doonaa waxtar server Internet Suite.
Small si dhexdhexaad ah web hosting bixiyeyaasha sida iTools sababtoo ah waa xoog badan si ay u maareeyaan server ay heegan ah. Adeeg bixiyeyaasha waaweyn ayaa sidoo kale doonaya in ay gunti iTools galay qurbaannadooda.
Aspyr Media baxsadaan Daanyeer Island u Mac